Agganna Sutta - Ibali leBuddhist Story
I-Buddhist Creation Fable
Ngezihlandlo ezininzi uBuddha wenqaba ukuphendula imibuzo malunga nemvelaphi yezulu, ethi ukucinga ngezinto ezinjalo akuyi kubakhokelela ekukhululweni kwi- dukkha . Kodwa u-Agganna Sutta unikeza intsomi ecacileyo ecacisa indlela abantu ababophelwa ngayo kwivili le- samsara kunye nobomi emva kokuphila kwiiNqobo zeMithandathu .
Ngamanye amaxesha ibali libizwa ngokuba yingqungquthela yokudalwa kweBuddha. Kodwa sifundwe njengenkohlakalo, ncinane malunga nokudala kunye nokunye ngokukhankanya kwama-castes.
Kubonakala ngathi kuhloswe ukulwa namabali kwiRig Veda ecacisa i-castes. Ukuchaswa kukaBuddha kwi-caste inkqubo kufumaneka kwezinye iincwadi zakuqala; ubone, umzekelo, ibali loMfundi wePali.
I-Agganna Sutta ifumaneka kwi-Sutta-pitaka ye- Pali Tipitika , Yiyo-27th sutta kwi-Digha Nikaya, "iqoqo yeengxoxo ezinde." Kucingelwa ukuba yi-sutta (intshumayelo) ethetha ngeBuddha yembali kwaye igcinwe ngokuphindaphinda ngomlomo kude kubhalwe kwathiwa, malunga nekhulu le-1 BCE.
Ibali, lichazwe kwaye likhutshwe kakhulu
Ngaloo ndlela ndivile - ngoxa uBuddha wayehlala e-Savatthi, kwakukho ezimbini zeBrahm phakathi kwezihlwele ezazifuna ukuvunyelwa kwi- sangas ye- monastic. Ngenye imini busuku babona uBuddha ehamba. Unomdla wokufunda kuye, bahamba ecaleni.
UBuddha wathi, "Nina bobabini yiBrahmins, kwaye ngoku uhlala nabantu abahlala bengenamakhaya.
Ziziphi ezinye ii-Brahmins ezikuphathayo? "
Ba phendula bathi: "Akunjalo. "Siyahlwayelwa kwaye sisetyenziswe kakubi. Bathi thina maBrahmins azalwe ngumlomo kaBrahma, kwaye i-castes ephantsi izalwe kwiinyawo zikaBrahma, kwaye asifanele sidibanise nalabo bantu."
"I-Brahmins izalwe ngabasetyhini, njengabo bonke abantu," uBuddha uthe.
"Kwaye abantu bobabili ukuziphatha nokuziphatha okubi, abanobuhle kunye nabangenabungqina, banokufunyanwa kuzo zonke iindawo. Abanobulumko abayiboni iklasi yeBrah ngaphezu kwazo zonke ezinye ngenxa yokuba umntu oye waqonda ukukhanya waza waba yinto engaphezu kwayo yonke i-castes.
"Ozilumko uyazi ukuba nabani na kwihlabathi ababethembayo kwi-dharma banokuthi, 'Ndizalelwe nguDharma, eyenziwe nguDharma, uyindlalifa yeDharma,' kungakhathaliseki ukuba yiyiphi i-caste azalwa kuyo.
"Xa i-cosmos ifikelela ekupheleni kunye nezivumelwano, kwaye ngaphambi kokuba i-cosmos iqale, izidalwa zizalelwa kwihlabathi lase-Abhassara Brahma, ezi zinto zikhanyayo zihlala ixesha elide, zingondli nto kodwa zivuyisa. akukho zelanga okanye iinkwenkwezi, amaplanethi okanye inyanga.
"Ekugqibeleni kokugqibela, ngexesha elidalwa ngumhlaba, elihle kwaye elimnandi kunye nelithokisayo ukunambitha." Abantu abaye banambitha umhlaba baqala ukuyikhanga, bahlala beqhekeza emhlabeni omnandi, kunye nokukhanya kwabo kwanyamalala. yaba inyanga kunye nelanga, kwaye ngale ndlela, ubusuku nemini zazivelele, kunye neenyanga, kunye neminyaka.
"Njengoko izidalwa zazithoba ngomhlaba omnandi, imizimba yazo yaba yinto engaboniyo. Ezinye zazo zazintle, kodwa ezinye zazingendawo.
Abahle babedelela ababi kwaye baba nekratshi, kwaye ngenxa yoko, umhlaba omnandi wanyamalala. Kwaye bonke babebuhlungu kakhulu.
"Emva koko, i-fungus, into efana ne-mushroom, yanda, kwaye yayimnandi kakhulu. , bafumana ama-creepers amnandi, ngesiphumo esifanayo.
"Kwaye ke irayisi yabonakala ngobuninzi. badelelwa ngabanye, baza baxothwa ngaphandle kwimizana.
"Izinto eziye zanikela ekukhanukeni zakhula zivila, kwaye zagqiba ekubeni zingabuthi ziqoke irayisi kuyo yonke isidlo.
Kunoko, babeza kubutha irayisi ngokutya ezimbini, okanye ezintlanu, okanye elishumi elinesibhozo. Kodwa irayisi abaye bayigcina bayakhula, kwaye irayisi emasimini yeka ukukhula ngokukhawuleza. Ukunqongophala kwelayisi kubangela ukuba abantu bangathembi, ngoko ke bahlula amasimu zibe yimpahla ehlukeneyo.
"Ekugqibeleni umntu wathatha isalathiso somnye waza waqamba amanga ngawo, ngale ndlela, ubusela nokuqamba amanga zazalelwa. Abantu abavutha ngumyeni bambetha ngeentonga kunye neentonga, waza wajeziswa.
"Njengoko ezi zinto zimbi zavela, izigqibo zanquma ukukhetha inkokheli eza kwenza izigwebo kwaye zinike izijeziso.
"Abanye bakhetha ukubeka ecaleni kwezinto ezingcolileyo, kwaye bazakhela amaqabunga amaqabunga ehlathini baze baxubushe. Kodwa abo babengenakulungele ukucamngca bahlala kwiidolophana baza babhala iincwadi malunga nonqulo, kwaye ezo ziyiBrahmins zokuqala.
"Abanye baba ngabahwebi, kwaye le nto yaqala ukuba yi-Vaishyas okanye abathengisi. Iqela lokugqibela laba ngabazingeli, abasebenzi kunye nabakhonzi, kwaye laba baba yi-Sudra.
"Nabani na ovela kwiphina i-caste inokuba yinto enobubele okanye ayikho. Nabani na ovela kuyo nayiphi na indlela abangakwazi ukuhamba endleleni baze bakhululwe ngengqiqo, kwaye umntu onjalo uya kufumana iNirvana kule nto.
"I-Dharma yinto enhle kubo bonke abantu, kulo mbandela nangomnye olandelayo.
Kwaye amaBrahmins amabini ayavuya ngala mazwi.
Izinto Ezibalulekileyo Wonke umntu omele azi malunga namafu
Ukukhunjulwa nguRichard Steele
Izipho ezi-12 eziphambili ze-Snowboarders